July Dream: Clean Police
ကျွန်တော်က ဇူလိုင်အိမ်မက်ဆိုတော့... ဇူလိုင်လမှာ အိမ်မက်နေဆဲပါ... ဒါကြောင့် အိမ်မက်တိုင်းပြည်ကြီးဟာ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ အိမ်မက်တစ်ခုပါပဲ။
အိမ်မက်က နိုးထလာတဲ့အချိန်... လက်တွေ့ဘ၀မှာ တကယ်ဖြစ်နေရင် ဘယ်လောက် ကောင်းလိမ့်မလဲ...
နောက်တစ်ဖွဲ့ အကြောင်းရေးဗျာအစ်ကို စိတ်ဝင်စားတယ်...။ တစ်ချို့အချက်တွေကတော့ အပြင်မှာ တကယ်တမ်း အကောင်အထည့်ဖော်တဲ့အခါ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အခက်အခဲတွေရှိ နိုင်တောပေါ့...။ ဒါပေမယ့် အိပ်မက်ဆိုတာ လူတိုင်းမက်ခွင့် ရှိပါတယ်ဗျာ...။ ဟုတ်ဖူးလား? :)
ကျမရဲချုပ် ဖြစ်ခဲ့ရင် အဆင့်မြင့်အိမ်ယာ လုံးချင်းပေးနော် ...
ရွာသားလေးရေ... ဖြစ်ချင်တာက အိမ်မက်တွေပဲလေ။ အိမ်မက်တွေနဲ့ ရှေ့ဆက်နေတဲ့ ဘ၀လေးတွေပေါ့ဗျာ။ အဟဲ...
နောက်တစ်ဖွဲ့က ဘာအဖွဲ့လဲ ခင်ဗျ။ တချို့အဖွဲ့တွေကို ကျွန်တော် သေချာ မသိဘူးလေ။ ကိုယ်ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က သိတဲ့အဖွဲ့လောက်ပဲ ရေးလို့ ကောင်းတာဗျ။ အိမ်မက်ဆိုပေမယ့်လည်း... :P
အစ်မက ရဲချုပ်ဖြစ်ဖို့ထက် ရဲချုပ်ကတော် ဖြစ်ဖို့ အခွင့်အလမ်း ပိုများမှာပါ။ အဟီး။ အစ်မယောကျာ်း ရဲချုပ်ဖြစ်ရင် လုံးချင်းတော့ ရပါမယ်။ အစီရင်ခံစာရေး... ပြီးတော့ အဲဒီ စက္ကူတွေ လုံးပြီး ခြင်းထဲ ထည့်ပေ့ါဗျာ။
အဲဒီအိပ်မက်ကို အမြန်ဆုံးအကာင် အထည်
ဖော်နိုင်ပါစေရှင့်. အုပ်တစ်ချပ် သဲတစ်ပွင့်
Miss Congenialty ဇာတ်ကားထဲကလိုလေ ဟိဟိ
အိမ်မက်တွေ အကောင်အထည် ဖော်ဖို့က ကျွန်တော် ၁ ယောက်တည်းနဲ့ မရဘူးခင်ဗျ။ ဒါကြောင့် အိမ်မက်လေးပဲ ဆက် မက်လိုက်ပါရစေဗျာ။
Cloud နဲ့ နှင်းပွင့်ဖြူလေးရေ...
ရဲမေလုပ်ချင်ရင် ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဗိုက်ခေါက်ထူထူ အဆီတွေ ရစ်နေရင်တော့ ဗိုက်ချပ်အောင် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပေတော့ဗျို့။ အိမ်မက်နိုင်ငံတော်ကြီးမှာ ဗိုက်ပူရဲတွေ မထားဘူးဗျ။ အဟ...
အဲဒီအိပ်မက်က နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ကြာမှ မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်လာနိုင်မလဲ